Soo -saareyaasha Taxanaha UBREATH - Shiinaha Alaab -qeybiyeyaasha Taxanaha UBREATH & Warshadda
DHALASHADA ® Nidaamka Spirometer-ka Fudud (PF810)
DHALASHADA ® Nidaamka Spirometer (PF680)
DHALASHADA ® Nidaamka Spirometer (PF280)
DHALASHADA ® Nebulizer Mesh Wearable (NS180, NS280)
DHALASHADA ®Nidaamka Spirometer Multi-Function (PF810) waxaa loo isticmaalaa tijaabooyin kala duwan oo sambabada iyo neefsashada ah. Waxay cabbirtaa oo tijaabisaa dhammaan hawlaha sambabka iyo sidoo kale BDT, BPT, Baaritaanka Muruqyada Neefsashada, qiimeynta istaraatiijiyadda qaadashada, baxnaaninta sambabka iwm si loo helo xal guud oo ku saabsan caafimaadka sambabka.
DHALASHADA ® Nidaamka Spirometer Pro (PF680) wuxuu cabbiraa hawo hawleedka sambabada ee maadada oo ay ku jiraan labadaba dhicitaan iyo dhiirigelin iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda Pneumotachograph.
DHALASHADA ® Nidaamka Spirometer (PF280) waa spirometer -ka gacanta oo loo isticmaalo in lagu tijaabiyo shaqada sambabka mawduuca, waxay caawisaa cabiraadda saamaynta cudurka sambabka.
DHALASHADA ®Nebulizer Mesh Webble waa nebulizer mesh mesh -kii ugu horreeyey oo la gashado oo loo isticmaalo in lagu maamulo dawada qaab ceeryaamo ku neefsato sambabada. Waxay u shaqaysaa carruurta iyo dadka waaweynba ee lagu daaweynayo neefta, COPD, cystic fibrosis iyo cudurrada kale ee neef -mareenka iyo xanuunnada.
Soonka Sonkorta Dhiigga 100, 5.2 Sonkorta Dhiigga, Pneumotachograph Spirometer, Mashiinka Hubinta Sonkorta Shirkadda ugu Fiican, Qalabka Baaritaanka Sonkorta Dhiigga ee Bilaashka ah, Mashiinka Baaritaanka Sonkorta Dhiigga,